Hlola i-Taj Mahal, India - World Tourism Portal
Hlola i-Taj Mahal, eNdiya
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeTaj Mahal
Bukela ividiyo ngoTaj Mahal
Hlola i-Taj Mahal imabori emhlophe ebunjiwe ngophondo lwendlovu osebeni oluseningizimu lomfula uYamuna edolobheni laseNdiya Agra. Yathunyelwa kwa-1632 yinkosi uMughal u-Shah Jahan (wabusa kusukela e-1628 kuya ku-1658) ukuba ayobeka ethuneni lomkakhe amthandayo, uMumtaz Mahal; ibuye ibe nethuna likaShah Jahan uqobo. Ithuna liyindawo ephakathi nendawo yendawo yama-17-hectare (42-acre), ehlanganisa indawo yamaSulumane nendlu yezivakashi, futhi ibekwe ezivandeni ezihlelekile eziboshwe ezinhlangothini ezintathu ngudonga oluhlanjalulwe.
Ukwakhiwa kwe-mausoleum empeleni kwaqedwa e-1643, kodwa umsebenzi uyaqhubeka kwezinye izigaba zephrojekthi eminye iminyaka ye-10. Isakhiwo seTaj Mahal sikholwa ukuthi siqediwe ngokuphelele e-1653 ngesilinganiso esilinganiselwa ngaleso sikhathi ukuba sizungeze ama-rupees ayi-32 million, lapho i2015 izoba cishe ngama-52.8 billion rupees (US $ 827 million). Iphrojekthi yokwakha iqashe abanye ochwepheshe be-20,000 ngaphansi kokuholwa yibhodi labakhi.
ITaj Mahal yaqokwa njenge-UNESCO World Heritage Site e-1983 ngokuba "yitshe lobuciko bamaSulumane India nobunye bobuciko bomhlaba obuhlonishwa umhlaba wonke ”. Kubhekwa ngabaningi njengesibonelo esihle kakhulu sokwakhiwa kweMughal kanye nophawu lomlando ocebile waseNdiya. I-Taj Mahal iheha izivakashi eziyizigidi ezingama-7-8 ngonyaka.
Ithuna liyisisekelo esiyisisekelo sayo yonke inkimbinkimbi yeTaj Mahal. Yisakhiwo esikhulu semabula esimhlophe esimile kwisikwele esigcawini futhi siqukethe isakhiwo esilingana ne-iwan (umnyango obunjwe obukhulu be-arch) ophakanyiswa yidomethi enkulu ne-finial. Njengamathuna amaningi aseMughal, izinto eziyisisekelo zivela e-Persian.
Isakhiwo sesisekelo ikhiyubhu enkulu enamakamelo amaningi enamakhonkolo e-chamfered enza isakhiwo esingalingani esinamacala ayisishiyagalombili acishe abe amamitha ayi-55 (180 ft) ohlangothini ngalunye lwezinhlangothi ezine ezinde. Uhlangothi ngalunye lwe-iwan lufakwe nge-pishtaq enkulu noma umgwaqo omkhulu ohlanganisiwe onamakhonkolo amabili akhiwe ngokufana afakwe kuhlangothi zombili. Le motif yama-pishtaq agxiliwe iphindaphindeka ezindaweni ezisekhoneni ezinomhluzi, okwenza ukwakheka kuhambisane ngokuphelele kuzo zonke izinhlangothi zesakhiwo. Amatshe amane abumba ithuna, elinye ekhoneni ngalinye le-plinth libheke emakhoneni e-chamfered. Igumbi elikhulu ligcina i-sarcophagi yamanga kaMumtaz Mahal no-Shah Jahan; amathuna uqobo asezingeni eliphansi.
Isici esimangalisa kakhulu udome wemabula edlula ethuneni. I-dome icishe ibe ngamamitha ayi-35 (115 ft) ukuphakama okusondelene nobude besisekelo, futhi kufakazelwa yi- "sigubhu" sesilinda esihlala phezu kwawo esingamamitha ayi-7 (23 ft) ukuphakama. Ngenxa yesimo sayo, i-dome ibizwa ngokuthi i-anyanisi dome noma i-amrud (guava dome). Ingaphezulu lihlotshiswe ngemidwebo ye-lotus futhi esebenza ukwandisa ukuphakama kwayo. Ukwakheka kwendunduma kugcizelelwa yizincwajana (ama-kiosks) ezine ezincane ezibekwe emakhoneni ayo, eziphindaphindeka ukwakheka kwe-anyanisi yedome main. Idome iyi-asymmetrical. Izisekelo zazo ezinamakholomu zivula ophahleni lwathuna futhi zinikeze ukukhanya kwengaphakathi. Izikhala ezinde zokuhlobisa (ama-guldastas) zanda kusuka emaphethelweni odonga olusisekelo, futhi zinikeze ukugcizelela okubukwayo ekuphakameni kwe-dome. I-lotus motif iyaphindwa kuzo zombili izingxoxo ze-chattris kanye ne-guldastas. Ama-dome kanye ne-chattris agcinwa yi-finial ehlanganisiwe ehlanganisa izinto zokuhlobisa zendabuko zasePheresiya naseHindustani.
Okuyisihluthulelo kwasekuqaleni kwenziwa ngegolide kepha kwafakwa ikhophi elenziwe ngethusi elihlanganisiwe ekuqaleni kwekhulu le-19th. Lesi sici sinikeza isibonelo esicacile sokuhlanganiswa kwezinto zokuhlobisa zendabuko zasePheresiya namaHindu. I-finial idotshwa yinyanga, isifaniso esijwayelekile samaSulumane izimpondo zaso zikhomba ezulwini.
Ama-minaret, angamamitha angaphezu kwe-40 (130 ft) amade, abonisa ubukhulu bokuqamba bomklami ngokufana. Zakhelwe njengama-minarets okusebenza- isiko lendabuko lamaSulumane, asetshenziswa yi-muezzin ukubiza amaSulumane athembekile emthandazweni. I-minaret ngayinye ihlukaniswe ngempumelelo izingxenye ezintathu ezilinganayo ngamakhakhamela amabili asebenzayo alalisa umbhoshongo. Ngaphezulu kombhoshongo kukhona i-balcony yokugcina enwetshwe yi-chattri ekhombisa ukwakheka kwalabo abasesethuneni. Ama-chattris wonke ahlanganyela izakhi ezifanayo zokuhlobisa zomklamo we-lotus odluliswa finial okhethiweyo. Ama-minarets akhiwa kancane ngaphandle kwe-plinth ukuze kuthi lapho kwenzeka kuwa, ukuvela okujwayelekile nokwakhiwa okuningi kwesikhathi, impahla evela emibhoshongweni ingahle iwele phansi ethuneni
Izikhokelo Zohambo Olusemthethweni
Imihlahlandlela esemthethweni iyatholakala e-Agra usuku lwesigamu (kufaka phakathi iTaj Mahal & Agra Fort). Akunazinkomba eziningi ezigunyazwe ezisemthethweni ezingaphandle kwezezikhumbuzo ukuze uma udinga umhlahlandlela wokuvakasha osemthethweni ungabhuka noma iyiphi yanoma yiluphi umhlahlandlela wabavakashi abakhuluma ezinye izilimi ngokuqondile noxhumana naye. kusuka ehhovisi labaqondisi elivunyelwe kwa-Agra (iHhovisi le-Approved Guide Association Agra). Amagayidi aqashelwa futhi avunywa nguMnyango Wezokuvakasha, uGovt. waseNdiya. Imihlahlandlela enikezwe iningi lama-ejensi okuhamba noma amahhotela e-Agra imvamisa iphikelela ukuthi ivakashele isitolo sezitolo bese ithumela ikhomishini enkulu; le khomishini isatshalaliswa kwabaqondisi abangashicileli, abameli bezokuvakasha noma abasebenzi behhotela.
Qaphela: ukwenza ukuvakasha kwakho kube mnandi kakhulu 'ngezinsiza zabaqondisi' ku-inthanethi kuhambo lwe-Agra, ngoba athembeke kakhulu kunenkomba enikezwe amahhotela e-Agra. Wonke amadeski okuhamba athathwa ngabanikazi bezitolo futhi bayaphoqa ukuthi bavakashele leso sitolo esikhulu.
Nge-Ephreli 2011 ephumelelayo, i-Archaeological Survey yaseNdiya yethule ngokusemthethweni indawo yokulalela yomsindo eqondiswa yiziqu zamazinga ezivakashi. Lolu hambo luvumela izivakashi ukubona iTaj Mahal ne-Agra Fort ngejubane lazo, ngolwazi oluyiqiniso nolunembile. Izivakashi zingathola isizinda somhlahlandlela womsindo esivela kwigumbi elisemthethweni lomhlahlandlela womsindo oseduze kwezindawo zokubala zamatshe esikhumbuzo. Amanani ezinsizakalo zomhlahlandlela wokulalelwayo angama-US $ 2 e-English kanye Nezilimi Zakwamanye Amazwe (okwamanje okuyiFrance, iSpanishi, isiNtaliyane, isiJalimane) ngezilimi zase-Hindi nezaseNdiya.
Ukubuyekezwa kwemihlahlandlela yomsindo kube nokuhle kakhulu kuTradadvisor nakwamanye amawebhusayithi okuvakasha futhi le kuyindlela enconyiwe yokubona izikhumbuzo ezimbili ze-Agra.
Imithetho Nemigomo eTaj Mahal
Ezokuphepha ziqinile futhi kunemithetho nemigomo eminingi eTaj Mahal. Eziningi zalezi azisebenzi, njengoba kuvamile eNdiya. Isibonelo, abasebenzi beTaj Mahal intuthu bashayela izimoto ezihamba ngophethiloli kanye nemfucumfucu kuleyo ndawo. Abavakashi abaningi bathatha izithombe yonke indawo, kufaka phakathi lapho izimpawu zivimbela khona, futhi onogada abenzi lutho.
Izikhali, izinhlamvu, umlilo, izinto zokubhema, imikhiqizo kagwayi, utshwala, ukudla, itshungama, imimese, ucingo, izincwadi, ishaja ephathekayo, izimpahla zikagesi (ngaphandle kwamakhamera wevidiyo, amakhamera wezithombe nemikhiqizo efanayo yabathengi efana nabadlali beMP3, ama-iPhones, ama-Smartphones njll. . nezidlali zomculo) azivunyelwe ngaphakathi kweTaj Mahal tata. Shiya lezi ehhotela noma emotweni yomshayeli wakho. Gwema ukuphatha isikhwama ngokuphelele uma ungakwazi njengoba inqubo yokuskena isikhwama iyimbi.
Amaselula avumelekile. Kubonakala sengathi akukho okuphoqelela lokhu ngezingcingo zekhamera.
Ukudla nokubhema kunqatshelwe ngokuphelele ngaphakathi kweTaj Mahal tata.
Ama-Lockers ayatholakala emasangweni ukugcina impahla yakho (yebo, ngengozi yakho).
Gwema ukuphatha izikhwama ezinkulu nezincwadi ngaphakathi kwesikhumbuzo ngoba lokhu kungandisa isikhathi sakho sokuhlola ukuphepha.
Amakhamera wevidiyo avumelekile ukukhuphuka epulatifini le-sand sand ebomvu esangweni lokungena lesakhiwo seTaj Mahal. Kukhona imali ekhokhwayo ngekhamera ngayinye yevidiyo.
Ukuthwebula izithombe akuvunyelwe ngaphakathi kwe-mausoleum enkulu, futhi izivakashi ziyacelwa ukuba zingenzi umsindo ngaphakathi kwe-mausoleum.
Abavakashi kumele basebenzisane ukuze kugcinwe isikhumbuzo sihlanzekile futhi sihlanzekile ngokusebenzisa izimbotshana zothuli.
Gwema ukuthinta nokuhlola izindonga nezindawo zesikhumbuzo njengoba lezi zingosi zakudala zamagugu ezidinga ukunakekelwa okukhethekile.
Abavakashi bayayalwa ukuthi baqashe izinkomba zomsindo ezisemthethweni ezitholakala kwikhawunta yamathikithi e-ASI noma zisebenzise kuphela imihlahlandlela evunyelwe ehlelwe ngaphambilini.
Abavakashi bavunyelwe ukuphatha ibhodlela lamanzi ngaphakathi kwesikhumbuzo. Izembozo zezicathulo, i-1 / 2 ilitha lamanzi webhodlela kanye ne-Tourist Guide Map ye-Agra anikezwa mahhala ngezindleko zetikiti lokungena lakwakwamanye amazwe iTaj Mahal. Ngemuva kokuthola ithikithi lakho, qhubekela ohlangothini lwewindi lamathikithi ukuqoqa amanzi neziembozo zakho zezicathulo.
Izihlalo ezinamasondo zabantu abakhubazekile namabhokisi Usizo Lokuqala ayatholakala eHhovisi le-ASI ngaphakathi kweTaj Mahal tata. Imali ekhokhwayo izobekwa njengokuvikeleka ngaphambi kokuba izihlalo ezinamasondo zitholwe abakhubazekile.
Zonke izinto eziphawulwe ngenhla kanye nezingcingo ezivinjelwe ukubukwa ebusuku kweTaj Mahal.
Amakhamera wevidiyo avunyelwe ngemuva kokubheka ukuphepha ngesikhathi sokubuka iTaj Mahal ebusuku, yize amanye amabhethri enqatshelwe.
Khumbula ukuthi iTaj Mahal yindawo yenkolo futhi kungcono ukugqoka ngokungagodli uma uvakashela iTaj Mahal tata, hhayi ngoba iTaj Mahal uqobo lwayo iyinhlangano mausoleum, kodwa futhi ngoba kunama-mosque ngaphakathi kweTaj Mahal tata, uma ufisa ukwenza njalo vakashela nabo.
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi iTaj Mahal ivalwa njalo ngoLwesihlanu.
Uma uhlela ukuvakashela i-Agra Fort futhi, bamba ithikithi lakho leTaj Mahal ngoba likunikeza isaphulelo emalini yokungena. Kwesinye isikhathi ihhovisi lamathikithi alinikezi isaphulelo - akukho okuningi izivakashi ezingenza ngakho.
I-Taj Mahal iyi-mausoleum enkulu yemabula emhlophe, eyakhelwe phakathi kwe-1631 ne-1648 ngomyalo wombusi wase-Mughal u-Shah Jahan ekukhumbuleni unkosikazi wakhe amthandayo. ITaj Mahal isho iCrown Palace. Elinye igama lomkakhe kwakunguM Mumtaz Mahal, umhlobiso weSigodlo. I-Taj ingelinye lamathuna agcinwe kahle futhi anobuhlakani bemvelo emhlabeni, elinye lamakhono wobuciko bokwakha kwamaNdiya amaSulumane, nelinye lamasayithi amahle amagugu omhlaba.
I-Taj Mahal inempilo yayo ephuma emabula, uma nje uqonda ukuthi ayisikhumbuzo sothando. Imbongi yaseNdiya uRabindranath Tagore wayibiza ngokuthi yi-teardrop esihlathini saphakade, kanti imbongi yesiNgisi, uSir Edwin Arnold, ithe bekungeyona ingxenye yokwakha, njengoba kwenza ezinye izakhiwo, kepha izinkanuko zothando lombusi olwenziwe ematsheni aphilayo . Kungumkhosi wowesifazane owakhiwe ngemabula, futhi leyo yindlela yokwazisa.
Yize singesinye sezakhiwo ezakhethwe kakhulu emhlabeni futhi saziwa ngokushesha, empeleni ukusibona kuyesabeka. Akuyona yonke into esezithombe. Izizathu zalesi sakhiwo zibandakanya ezinye izakhiwo ezinhle eziningana, zibonisa amachibi, izingadi ezihlotshisiwe zokuhlobisa ezinezihlahla eziqhakaza nezihlahla, kanye nesitolo esincane sezipho. I-Taj eyenziwe yizihlahla futhi ibonakaliswa echibini iyamangalisa. Vala, izingxenye ezinkulu zesakhiwo zimbozwe ngamatshe abunjiwe.
Kukhona inkolelo-ze-Apocryphal ethi uSah Jahan wahlela ukwakha ikhophi eliqondile leTaj Mahal ephuma emabula emnyama ngaphesheya komfula njengethuna lakhe. Amacebo akhe adukiswa yindodana yakhe, eyabulala abafowethu abathathu abadala futhi yaqothula ubaba wayo ukuthola ubukhosi. UShah Jahan manje ungcwatshwe eceleni komkakhe eTaj Mahal.
I-Taj ivulekile kusuka ku-6: 00 AM kuya ku-6: 30 PM (ukushona kwelanga) nsuku zonke ngaphandle kwangoLwesihlanu. Amasango ngeke avule kuze kube i-6: i-00 AM ekuqaleni, imizuzu embalwa kamuva, ngakho-ke ungazihluphi ngokufika lapho nge-5: 00 AM. Fika lapho kusenesikhathi ukushaya izixuku. Izixuku ziba zinkulu impela phakathi neviki lapho abantu begubuzela ubukhazikhazi beTaj. Hlela ukuvakashela i-Taj okungenani izikhathi ezimbili ezihlukene phakathi nosuku (kokusa nokusa kungcono kakhulu) ukuze ubone umphumela ophelele wokushintsha ukukhanya kwelanga esakhiweni esimangalisayo. Kuyamangaza impela ngaphansi kwenyanga egcwele. Ungathola futhi ukubukwa okuhle kakhulu kusuka kuMehtab Bagh. Kungumqondo omuhle ukuletha ithoshi, ngoba ingaphakathi leTaj Mahal limnyama impela emini. Ukwazisa ngokuphelele imininingwane yama-gem inlays, udinga ukukhanya okuhle.
Ukuthenga amathikithi, ungaya esangweni laseNingizimu, kepha leli sango liyi-1 km kude kakhulu nokungena futhi ikhawuntari ivulwa nge-8: 00 AM. Emasangweni aseNtshonalanga nasempumalanga, amakhawuntari avulwa ku-6: 00 AM. Lawa masango futhi anemigqa emincane ngezikhathi eziphakeme njengoba amabhasi amakhulu okuvakasha eshiya amaqembu esangweni laseNingizimu. Eceleni kwekhawunta yamathikithi, ungathenga nohambo lomsindo oziqondisayo (kuvumela amabili kudivayisi).
ITaj itholakala maphakathi nedolobha. Lindela umugqa ozongena ezinhlangeni. Kunamasango amathathu. Isango lasentshonalanga yisango elikhulu lapho iningi labavakashi lingena khona. Inani elikhulu labantu lifika ngezimpelasonto nangamaholide omphakathi, futhi ukungena ngesango lasentshonalanga kungathatha amahora amaningi. Amasango aseningizimu nasempumalanga ahlala ematasa kakhulu futhi kufanele azanywe ngalezozinsuku.
Kunemihlangano yokubuka ebusuku ngesikhathi sokuthwasa okugcwele nezinsuku ezimbili ngaphambi nangemva (izinsuku ezinhlanu zizonke). Ukukhishwa kungoLwesihlanu (isabatha lamaSulumane) nenyanga yeRamadan. Amathikithi kufanele athengwe amahora we-24 ngaphambi kwe-Archeological Society ye India ihhovisi eliku-22, Mall Road, Agra. Amathikithi asebusuku aqala ukuthengiswa e-10 am, kepha awahlali ethengiswa, ngakho-ke kungakuhle ukubhekele kuwo lapho ufika noma ngabe ngemuva kwamathikithi we-10 am kuvumela kuphela ukubuka kusuka endaweni ebomvu yepulasitiki ekupheleni kweningizimu eyinkimbinkimbi, futhi iwindi lehora le-1 / 2 kuphela. Qiniseka ukuthi ukugqoka okukulimaza komiyane. Ukubheka amahora okubukwa ebusuku kusuka ku-8: 30pm-9: 00pm and 9: 00pm-9: 30pm. Fika imizuzu ye-30 kusenesikhathi ukuze uhlolwe ezokuphepha ekhawunteni yeTaj Mahal Ukunikezwa ithikithi ku-East Gate noma ungalahlekelwa yithuba lakho.